Eyona midlalo ilishumi ilungileyo yebhola ekhatywayo ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi- Iindaba zeGajethi | Iindaba zeGajethi
Eyona midlalo ilishumi ilungileyo yebhola ekhatywayo ngaphandle kwe-Intanethi, ye-iOS kunye ne-Android
ILaliga Santander sele iza kuqhubeka kwaye isuti yebhola sele iqala ukubonisa, singayisebenzisa ukuze sifudumeze iinjini zethu phantse. Embindini we-2020, ukudlala umdlalo wevidiyo uwedwa kuncinci kwaye kuncipha rhoqo, kodwa asisoloko sifuna ukukhuphisana nabanye abadlali kwaye asinakho ukufikelela kunxibelelwano olufanelekileyo lwe-intanethi ukwenza njalo. Into esisiseko njengokudlala imidlalo yebhola ekhatywayo ngaphandle kwe-intanethi isenokwenzeka.
KwiGoogle Play okanye kwiAppStore kukho inani elikhulu lemidlalo yebhola ekhatywayo, uninzi lwayo lusimahla kodwa lufuna unxibelelwano olusisigxina kwi-intanethi, oko ke kuthintela ukuba ungangeni kubo xa uswele idatha okanye iWiFi, Esona sisombululo kukuba nemidlalo eyahlukeneyo onokuyidlala ngaphandle kolo nxibelelwano. Kweli nqaku siza kwenza ukudityaniswa kwezona zibalaseleyo kwi-smartphone okanye kwithebhulethi.
1 Uluhlu lweyona midlalo ilishumi ilungileyo yebhola ekhatywayo ngaphandle kwe-intanethi ye-iOS kunye ne-Android
1.1 Ibhola ekhatywayo yeFFA
1.3 Iphupha lebhola ekhatywayo
1.5 I-Soccer Star 2020 yeLigi eziPhambili
1.6 Umphathi weBhola ekhatywayo 2020 Iselula
1.7 Umdlalo wokugqibela weKick 2019
1.8 I-Eleven 2020 ephezulu
1.9 INdebe yeBhola ekhatywayo ye2020
1.10 Ibhola ekhatywayo yeRetro
Uluhlu lweyona midlalo ilishumi ilungileyo yebhola ekhatywayo ngaphandle kwe-intanethi ye-iOS kunye ne-Android
Sinezihloko ezininzi ezihlangabezana nale mfuno, zonke zisebenza ngaphandle kwengxaki, ukusukela ifakwe ngokupheleleyo kwimemori ye-smartphone yethu. Kufuneka kuqatshelwe ukuba phantse zonke ziyafumaneka kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android. Sithatha eli thuba ukukhumbuza ukuba sisandula ukupapasha isifundo phucula ukusebenza kweemidlalo kwi-Android.
Ibhola ekhatywayo yeFFA
Ukumkani wookumkani ngokungathandabuzekiyo "YI-FIFA", umdlalo ozuze itrone yawo kwezemidlalo ezintle. Idalwe kwaye yenziwa yi-EA Sports, eyaziwa ngomgangatho wayo ongenakuphikiswa kwi-consoles okanye ehambelanayo, ikwayenye yemidlalo yebhola ekhatywayo yezixhobo eziphathwayo. Inawo onke amaphepha-mvume agciniweyo kunye nokuba kweli hlabathi, nokuba ngamaqela okanye abadlali.
Inemidlalo yokudlala eyahlukileyo ngokupheleleyo kunaleyo siyifumanayo kwinguqulelo yayo yekhonsoli, umdlalo weqonga otsala ngaphezulu kwicala leArcade Ngaphandle kokulinganisa okusulungekileyo. Eyona nto intle malunga nale nguqulo kukuba inendlela ye "Ultimate Team" evumela ukuba sonwabele ukuqhubela phambili kweqela lethu, lisayine abadlali. Yinto yasimahla yokudlala, ke ukhuphelo lwayo luya kuba simahla kunye nokuthengwa kwangaphakathi nohlelo.
Umthuthukisi: Arts electronic
Ngoku sihamba nesihloko esitshintsha itrone kunye neFIFA, ayikho enye ngaphandle kwePES yasentsomini, I-franchise ethi izame ukugcina unyaka nonyaka ngokuphuculwa komdlalo, kodwa ilahlekelwe ngumsi xa kufikwa kwimvume. Ngelixa kuyinyani ukuba le nguqulo yezixhobo zeselfowuni inecandelo lobuchwephesha elingakholelekiyo, elonwabisa wonke umntu odlalayo.
Sinomdlalo weqonga ofana noweFIFA, sitsala indawo ephawuleka kakuhle yeArcade. Nangona injongo yethu kukudlala sisodwa, siya kuba nemidlalo eyondliweyo yabadlali abaninzi kwiitumente, kubandakanya iiligi zalapha kunye nabahlobo abaxhume ngonxibelelwano lweBluetooth.
Ibhola lebhola i-PES 2021
Ezi titan zimbini azinakudideka, kuba kukho ubomi obungakumbi emva kwazo, yenye yezona midlalo zibaliwe kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android. Idibanisa umdlalo olungileyo, imizobo eyothusayo kunye neelayisensi. Oku kubangela Inani elikhulu leeligi, amaqela kunye nabadlali.
Iindidi ezahlukeneyo zemidlalo, phakathi kwayo yeyona inika intsingiselo kumdlalo, apho sinenkululeko yokuzibandakanya "neQela lamaPhupha". Ukongeza siya kuba nokufikelela kwimowudi yabadlali abaninzi ukuba sinqwenela. Inguqulelo yakho ye-iOS inyanzela ukuba sinxibelelane, nangona kunjalo ndiyishiya ikhonkco.
Umthuthukisi: Imidlalo yokuQamba yokuQala Ltd.
I-Soccer League yeBhola ekhatywayo 2021
Esi sihloko siphuhlisiwe kwaye sapapashwa nguGameloft asinakuphoswa. Yeyona simulator yasimahla kwaphela, apho Singazenzela iqela lethu, sisayine abadlali okanye amalungu oqeqesho.
Siza kuba nethuba lokwakha isixeko sethu sezemidlalo kwaye siyiphucule ngokuthe ngcembe, kule meko asiyonwabisi imo yabadlali abaninzi, nangona sinomxholo owaneleyo ngaphandle kweintanethi ukuba ungaphoswa.
Umdlalo webhola ekhatywayo wenene 2020
I-Soccer Star 2020 yeLigi eziPhambili
Apha sifumana isihloko esigxile ngokukodwa kwiligi zamazwe ahlukeneyo, esivumela ukuba sithathe inxaxheba kuzo zonke. Singawuqala umsebenzi wethu njengomdlali oqhelekileyo wokugqibela ukuba yinkwenkwezi enkulu, bakhuphisana kumaqela aphambili kwihlabathi.
Ukongeza ebaleni lezemidlalo, kuya kufuneka sinyamekele elizimeleyo, apho singathenga khona izindlu okanye iimoto. Kananjalo nokuqesha abaqeqeshi bethu ukusinceda kwinkqubela phambili yethu.
I-Soccer Star ye-2021 yeeLigi eziPhambili: Owona Mdlalo weBhola Ekhatywayo
Umthuthukisi: Viva Imidlalo yeeStudiyo
I-Soccer Star 2021 yeeLigi eziPhezulu
Umthuthukisi: Hlaziya iMidlalo
Umphathi weBhola ekhatywayo 2020 Iselula
Iklasikhi phakathi kwezakudala. Asingomdlalo webhola ekhatywayo oqhelekileyo njengeFIFA okanye iPES, kule meko Ngumdlalo wolawulo lwezixhobo, kwezoqoqosho nakwezemidlalo. Sithatha izintso zeqela njengoyena mmeli uphezulu kwaye umsebenzi wethu iya kuba kukuwusa phezulu.
Le SEGA yeklasikhi iyafumaneka kuzo zombini i-Android kunye ne-iOS ngexabiso le- € 9,99Ekuqaleni kunokubonakala ngathi kuyabiza, kodwa isixa seeyure esinokutyala imali siyathethelela. Ndikucebisa ukuphanda ngaphambi kokubukela i-GamePlay ukufumana umbono wento ekubonelela ngayo.
ixabiso: € 9,99
Umlawuli weBhola ekhatywayo we2020
ixabiso: € 9,99+
Umdlalo wokugqibela weKick 2019
Esinye isihloko esingayi kudlala kwisitayile sendabuko, apho Injongo yethu kukudlala nokuphumelela imijikelo eyahlukeneyo yezohlwayo, Ngamaqela aphambili kwihlabathi. Inemowudi engaxhunyiwe kwi-intanethi nakwi-intanethi, ekuvumela ukuba udlale nabahlobo.
Ngokuqinisekileyo ngowona mdlalo ulula kuluhlu lonke, apho nawuphina umdlali anokukhuliswa ngokulula kungakhathalelwanga ubudala okanye amandla.
Umdlalo wokugqibela we-2019: Eyona nto ibalaseleyo ekhatywayo kwi-Intanethi
Umdlalo wokugqibela wokukhaba: ibhola ekwi-Intanethi
I-Eleven 2020 ephezulu
Kulo mdlalo apho ophambili ayinguye umdlali webhola, kodwa umqeqeshi. Njengomphathi webhola, sifumana umdlalo wevidiyo yolawulo, apho sinokujongana khona neprojekthi yeklabhu encinci ukuyiguqula ibe yeyona inkulu. Esiqinisekisa ngenani elikhulu leeyure zokuzonwabisa.
Ngumdlalo ophumelele isiseko esikhulu somsebenzisi ngenxa yokusebenza kwawo okuhle. Singayilawula yonke into eyenzekayo, kwezemidlalo kunye nezoqoqosho.. Uyilo lweejezi, abadlali, indlela ezakhiwe ngayo, ezemali okanye ibala ngokwalo.
Phezulu kweshumi elinanye 2021: Umphathi webhola
Abalishumi elinanye abaphezulu: Umphathi weSoka
INdebe yeBhola ekhatywayo ye2020
Indebe yebhola ekhatywayo ngumdlalo webhola ekhatywayo omnandi, apho kuya kufuneka siphumelele kuzo zonke iintlobo zemiceli mngeni esiza kuyivula njengoko sidlala. Umdlalo ungomnye wobunzima obuncinci kwimemori kunye neemfuno zobugcisa. Oku kuthetha ukuba iya kusebenza kakhulu ulwelo nakuluhlu lokufaka.
Siza kuba nemowudi yokusebenza apho sinokuqhubela phambili kunye nokuphucula iqela lethu. Umdlalo yenye yezona zinokwenzeka ngokwenyani.
INdebe yeBhola ekhatywayo 2021: Imidlalo yebhola ekhatywayo
Umthuthukisi: IMIDLALO YOLWAZI - ibhola ekhatywayo yentenetya ibhola ekhatywayo
Umdlalo webhola ekhatywayo 2021
Umthuthukisi: Inkqubo ye-Inlogic sro
Ibhola ekhatywayo yeRetro
Ukuphelisa oku kudityaniswa, siya kunye nomdlalo omnandi kunye nokungaqhelekanga. I-Retro Soccer ngumdlalo we Ibhola ekhatywayo enembonakalo engeyonyani kodwa enemibala. Inomdlalo weqonga kunye nomdlalo olula kubo bonke abaphulaphuli.
Iqulethe iindlela ezahlukeneyo zomdlalo, kubandakanya iindlela zeligi okanye imiceli mngeni yobuqu.
I-Retro Soccer-Ibhola ekhatywayo yeArcade
Umthuthukisi: I-Studios yeMidlalo eshukumayo
Umthuthukisi: Iselfowuni zokuDlala iMidlalo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Eyona midlalo ilishumi ilungileyo yebhola ekhatywayo ngaphandle kwe-Intanethi, ye-iOS kunye ne-Android
I-ASUS ZenBook Duo: Ilaptop yescreen esinexesha elizayo
Indlela yokudlulisa isicatshulwa ngesandla ngqo kwikhompyuter yakho ngeelensi zikaGoogle